တိုးတက်ပြောင်းလဲလာပြီဖြစ်သော Tattoo ယဉ်ကျေးမှု ~ White Angel
တိုးတက်ပြောင်းလဲလာပြီဖြစ်သော Tattoo ယဉ်ကျေးမှု
2:32 PM အဖြူရောင်နတ်သမီး 24 comments
တိုးတက်ပြောင်းလည်းလာပြီဖြစ်သော ယနေ့ခေတ်တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ
လူငယ်များအကြား ရေပမ်းစားလာသော Tattoo ဟုခေါ်သည့် မိမိတို့၏ ကိုယ်ပေါ်တွင်
ဆေးမှင်ကြောင်များ အလှရေးဆွဲပုံဖော်ခြင်း ဖက်ရှင်သည်လည်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှေးယခင် ဘုရင်များလက်ထက်ကတည်းက “ထိုးကွင်းရှိမှ
ယောက်ျားပီသသည်”ဟု ယူဆကြပြီး အမျိုးသားများသည်
ဆေးမှင်ကြောင်ထိုးကွင်းများကို မိမိတို့၏ ကိုယ်ပေါ်တွင် ဆေးတစ်စက်
စုတ်တစ်ချက်နှုန်းဖြင့် ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးကို အနာခံ၍ထိုးခဲ့ကြသည်။
ထိုမှတဆင့် အုပ်ချုပ်သူ ဘုရင်ခေတ် ကုန်လွန်ပြီနောက်ပိုင်းတွင်တော့
ဆေးမှင်ကြောင်ထိုးသူများ တစ်စထက်တစ်စ လျော့ပါးလာခဲ့ပြီး “စစ်မှုထမ်းသူများ
စစ်မှုထမ်းခွင့်မရှိစေရ” ဟူသည့် ဥပဒေများ တရားဝင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။
အစိုးရရုံးများနှင့် ဆက်နွယ်၍ အလုပ်လုပ်ရသူများ၊
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါက ဆေးမှင်ကြောင်ထိုးထားသူသည်
လူအများ၏ Respect ဟုခေါ်သော ရိုသေလေးစား အလေးထားဆက်ဆံမှု
မြန်မာလူမျိုးများသာမက အရှေ့တိုင်းသားအများစု၏ အယူအဆတွင်
ဆေးမှင်ကြောင်ထိုးခြင်းသည် “ယဉ်ကျေးမှုနှင့်မညီ”ဟု သတ်မှတ်လာရာမှ
အသိအမြင်များ ကျယ်ပြန့်လာပြီး ယနေ့ခေတ်တွင် ဆေးမှင်ကြောင်ထိုးထားသော
လူတစ်ယောက်၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဆုံးဖြတ်၍မရ
အထူးသဖြင့် အနောက်နိုင်ငံများတွင် ဆေးမှင်ကြောင်ထိုးခြင်းကို
ဖက်ရှင်တစ်ခုအနေဖြင့် အမျိုးသားများပါမက အမျိုးသမီးများကပါ
Tattoo ဟုခေါ်သော ဆေးမှင်ကြောင်ထိုးခြင်းကို နှစ်၅၀၀၀ ခန့်က
Polynesiaနိုင်ငံမှ “ စ ”ခဲ့ပြီး Polynesia ဘာသာစကားဖြင့် “ ta” ဆိုသည်မှာ
“ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ” ၊ “ tatau ” ဆိုသည်မှာ “အမှတ်အသားတစ်ခု
ပြုလုပ်ခြင်း” ၊ တနည်းအားဖြင့် “ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အမှတ်အသား ” ဟု
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားကြောင်း သမိုင်းအထောက်အထားများအရ သိရှိခဲ့ရသည်။
ထိုမှတဆင့် Japan ၊ China ၊ India ၊ Indonesia ၊ Thailand ၊ Africa ၊
Egypt ၊ Greece & Rome ၊ New Zealand ၊ အစရှိသော နိုင်ငံများသည်လည်း
Tattoo ယဉ်ကျေးမှုကို မရှေးမနှောင်း “ စ ” ခဲ့ကြပြီး ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးသို့
အထူးသဖြင့် Tattoo ယဉ်ကျေးမှုကို ကမ္ဘာလှည့်သွားလာနေကြသော
သင်္ဘောသားများမှတဆင့် မိမိတို့၏ နိုင်ငံအသီးသီးသို့
Tattoo ကို ယေဘူယျအားဖြင့် (၂)မျိုးခွဲခြားထားသည်။
တချို့က တစ်ရက်မျှသာခံသော အသင့်ရေးဆွဲပြီးသား Tattoo ကပ်ခွာပုံများကို
တချို့က မိမိတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင် ရာသက်ပန်စွဲမြဲနေစေရန်
အထူးစီမံပြုလုပ်ထားသော “စုတ်” ဟုခေါ်သည့် ဆေးထိုးတံကို အသုံးပြု၍ အရေပြား၏
အပေါ်ယံလွှာတွင်းသို့ ဆေးမှင်ရည်ကို ထိုးသွင်းပုံဖော်ကြသည်။
ယခုခေတ်တွင်တော့ “ စုတ်” ဟုခေါ်သော တစ်ချောင်းထိုးအပ်ကို
အသုံးပြုမှုနည်းပါးလာပြီး မြန်ဆန်သော လျှပ်စစ်အပ်ကို ပို၍
အပ်များကို အသုံးပြုရာတွင်လည်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ရောဂါပိုးမကူးဆက်စေရန်
နဂါးပုံ၊ ကျားပုံ၊ ခြင်္သေ့ပုံ၊ မြွေပုံ၊ ပန်းပုံ၊ ဘုရားစာပုံများကို
အရှေ့တိုင်းသားများက နှစ်သက်ကြပြီး အနောက်တိုင်းသားများကတော့
၎င်းတို့နှစ်သက်စွဲလန်းသော အနုပညာရှင်များ၏ အမည်များ၊ အနုပညာရှင်များ၏
မျက်နှာရုပ်ပုံများ၊ မိမိတို့၏ မိသားစုဝင်အမည်များ၊ ချစ်သူအမည်၊
တရုတ်စာလုံးများနှင့် အခြားသော ရုပ်ပုံများကို ရေးထိုးလေ့ရှိကြသည်။
Tattoo အထိုးအများဆုံးနိုင်ငံများထဲမှ အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့်
အင်္ဂလန်နိုင်ငံသားများထိုးလေ့ရှိသော Tattoo ဒီဇိုင်းများမှာ Polynesia
ဒီဇိုင်းဟုခေါ်သော ကနုတ်ပန်းဆန်သည့် ဒီဇိုင်းပုံများပင်ဖြစ်သည်။
Tattoo ထိုးထားသူများအား စစ်တမ်းကောက်ကြည့်ရာတွင် အမျိုးသား၆၀% နှင့်
အမျိုးသမီး၄၀% ရှိကြပြီး၊ လူငယ်ပိုင်းဟုခေါ်သော အသက်(၁၈)နှစ်အထက် ၅၀% ၊
လူလတ်ပိုင်းဟုခေါ်သော အသက်(၃၅)နှစ်အထက် ၃၅%နှင့် လူကြီးပိုင်း ၁၅%
ရှိကြောင်း လေ့လာသိရှိရပါကြောင်းနှင့် ကျမလက်ရှိနေထိုင်လျှက်ရှိသော
ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံတွင်းရှိ Tattoo ဆိုင်များထဲမှ “ Body Art ”
ဆိုင်ပိုင်ရှင် Marios နှင့် Tattoo လာထိုးသူ Steven တို့ကို
မေး။ Body Art ဆိုတဲ့ အမည်လေးကို ဘယ်လိုရွေးခဲ့တာပါလဲ။
ဖြေ။ Customerများရဲ့ ကိုယ်ပေါ်မှာ ပန်းချီရေးဆွဲပုံဖော်ပေးရတဲ့
လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက် Body Art လို့ အမည်ပေးလိုက်တာပါ။
မေး။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်လေး သိပါရစေ။
ဖြေ။ နံက်(၁၀)နာရီမှ ညနေ(၆)နာရီအထိ ဖြစ်ပြီး တနင်္ဂနွေနေ့ကိုတော့
မေး။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အများကြီးရှိတဲ့အထဲက Tattoo
ဖြေ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က Tattoo ထိုးတာကို ဝါသနာပါတယ်၊ ပြီးတော့
ကျွန်တော်ရဲ့ ဇနီးက အနုပညာတက္ကသိုလ်(Cyprus Collage of Art) နဲ့
ဘွဲ့ရထားသူဖြစ်တဲ့အတွက်ရယ် သူကိုယ်တိုင်က Tattoo ဒီဇိုင်းတွေကိုရေးဆွဲတဲ့
ဝါသနာပါတာကြောင့် လင်မယားနှစ်ယောက် ဝါသနာတူချင်းဖလှယ်ပြီး
ဒီစီးပွားရေးကို လုပ်ဖြစ်သွားတာပါ။ ဒီဆိုင်မှာရှိတဲ့ Tattoo ဒီဇိုင်း
အများစုဟာလည်း ကျွန်တော့်ဇနီးရေးဆွဲဖန်တီးထားတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေပါပဲ။
မေး။ ဒီဆိုင်လေးကို ဖွင့်ခဲ့တဲ့ သက်တမ်းနဲ့ စီးပွားရေးအခြေအနေ။
ဖြေ။ (၈)နှစ်ရှိပါပြီ၊ တနှစ်ထက် တနှစ် Tattoo ထိုးသူတွေ များပြားလာပါတယ်။
မေး။ Tattoo ထိုးရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်နိုင်ငံကနေ ဝယ်ယူပါသလဲ။
ဖြေ။့England Made အပ်တွေကို သုံးပါတယ်။ ဆေးရောင်တွေကတော့ American
မေး။ Tattoo ထိုးသူတွေထဲမှာ ဘာလူမျိုးတွေ များပါသလဲ။
ဖြေ။ ကျွန်တော်တို့ Cyprus နိုင်ငံဟာ Tourism နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက် (၇၀)%
ဟာ နိုင်ငံခြားသားများဖြစ်ပြီး၊ (၃၀)%ကတော့ ဒေသခံလူငယ်များဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ အသက်အပိုင်းအခြားအရ ကန့်သတ်ထားပါသလား။
ဖြေ။ ကျွန်တော်တို့ဆိုင်က အသက်(၁၈)နှစ်မပြည့်သေးတဲ့သူဆိုရင် Tattoo ထိုးမပေးပါဘူး။
မေး။ ဈေးနှုန်းထားလေး သိပါရစေ။
ဖြေ။ (၁)နာရီကို ယူရို(၄၀)မှ (၈၀)ကြား နှုန်းနဲ့ သတ်မှတ်ယူပါတယ်။
မေး။ Tattoo ပုံများကို ဘယ်လိုခွဲခြားထားပါသလဲ။
ဖြေ။ ၁။ Canadian Army လို့ခေါ်တဲ့ ခြောက်ခြားစရာအရိုးစုပုံများ၊ စစ်သေနတ်ပုံများ။
၂။ Coverups & Revamps လို့ခေါ်တဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာ
ရှိပြီးသားပုံများကို ပြန်လည်ဖြည့်ဆွက်ရေးဆွဲခြင်း၊ အရောင်ချယ်ပေးခြင်း၊
ပျက်စီးနေပြီဖြစ်တဲ့ ပုံအဟောင်းများကို ပုံအသစ်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ပြီး
၃။ Flowers & Fairies လို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီးများအတွက်
၄။ Little Pieces လို့ခေါ်တဲ့ အသေးစား Tattoo များ။
၅။ Miscellaneous လို့ခေါ်တဲ့ အရိုးခေါင်းပုံ၊ ကျွဲချိုပုံ၊
၆။ Oriental လို့ခေါ်တဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချပ်ကဲ့သို့ အနုစိတ်
ရေးဆွဲရတဲ့ Tattoo ပုံများ။
၇။ Portrait & Realistic လို့ခေါ်တဲ့ မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာ၊
စွဲလန်းရာ လူပုံ၊ အနုပညာရှင်များပုံ၊ ချစ်သူပုံ၊
၈။ Religious လို့ခေါ်တဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ Angelပုံ၊ မိမိကိုးကွယ်ရာ
၉။ Tribal & Maury လို့ခေါ်တဲ့ အာဖရိက
၁၀။ Polynesia ဒီဇိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ ကနုတ်ပန်းပုံစံအများစုပါတဲ့
မေး။ Tattoo ရဲ့ အနာဂတ်ကို သုံးသတ်ပေးပါ။
ဖြေ။ Tattoo ခေတ်ကို ရောက်ဖို့ ခြေလှမ်း“စ”နေပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။
မေး။ Tattoo ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရော Tattoo ထိုးထားပါသလား။
ဖြေ။ ကျွန်တော့်ရဲ့မျက်နှာနဲ့ ဇနီးသည်ရဲ့မျက်နှာပုံတူတွေကို
ကျွန်တော့်ရဲ့ လက်ဖြန် တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာထိုးထားပါတယ်။
မေး။ နောက်ဆုံးမေးခွန်းအနေနဲ့ Tattoo ထိုးထားသူ တစ်ယောက်ကို
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ Tattoo ဆိုတာ အနုပညာလက်ရာတစ်ခုပါပဲ။
“ Tattoo is the ART” ပါ။
မေး။ အခုလို ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်ရှင်။
ဖြေ။ ကျွန်တော်ကလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အကူညီလိုရင်လည်း အဆင်သင့်ပါခင်ဗျာ။
ဆိုင်ပိုင်ရှင် Body Art Tattoo ဆိုင်ပိုင်ရှင် Marios နှင့်
မေးမြန်းပြီး၍ ဆိုင်တွင်းမှ Tattoo လာထိုးသူ Steven ဆိုသူနှင့်
မေး။ မေးခွန်းလေး တချို့ မေးခွင့်ပြုနိုင်မလားရှင်။
ဖြေ။ ဟုတ်ကဲ့.. ရပါတယ်။
မေး။ Tattoo ကို ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ထိုးတာပါလဲ။
ဖြေ။ ကျွန်တော်နှစ်သက်လို့ပါ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်က Tattoo
ပုံကြောင့် ကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ အားအင်တွေပြည့်နေသလို ခံစားရလို့ပါ။
မေး။ ထိုးထားတဲ့ Tattoo ကို တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပြန်ဖျက်ဖို့ရော
မေး။ ကိုယ်ထိုးထားတဲ့ Tattoo ကြောင့် အများက
ကိုယ့်ကိုလေးစားမှုလျော့နည်းလာတာမျိုးနဲ့ ကြုံတွေ့ရင် ဘယ်လိုခံစားရမလဲ။
ဖြေ။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်မှာ ထိုးထားတဲ့ Tattooကို
ကျွန်တော်ကြိုက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်၊ ဒီTattoo ဟာ ကျွန်တော့်အတွက်ပါ၊
အများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး၊ အဲဒီအတွက် အများရဲ့ အမြင်ကိုလည်း
ကျွန်တော်လေ့လာဖို့ မလိုပါဘူး။ အဲဒီအတွက် ဘယ်လိုမှလည်း
မေး။ ခုလိုဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။
ဖြေ။ ဟုတ်ကဲ့.. ရပါတယ်။
ဆေးမှင်ကြောင် စုတ်ထိုးခြင်းသည် အနုပညာဆန်သည် (သို့မဟုတ်)အနုပညာတစ်ရပ်ဟု
ခေါ်ဆိုနိုင်သော်လည်း နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အလေ့အထ
ရှေးယခင်ဘုရင်များလက်ထက်က ဆေးမှင်ကြောင်ထိုးခြင်းကို လက်ခံခဲ့ကြသည်။
သို့သော် သေသည့်အထိပါသွားနိုင်သော အမှတ်အသားဖြစ်သောကြောင့်
စုတ်ထိုးခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး အလွယ်တကူ ကပ်နိုင်၊ ခွာနိုင်သော
ဆေးမှင်ကြောင်ထိုးခြင်း ခေတ်၏ရေစီးကြောင်းပေါ်မှ လူတို့၏ လက်ခံခြင်း၊
လက်မခံခြင်းတို့၏ အားပြိုင်မှုကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ကျမကတော့ ဆေးမှင်ကြောင်ထိုးခြင်း၊ မထိုးခြင်း ၊ကောင်းခြင်း၊
မကောင်းခြင်းသည် မိမိနေထိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်၊ နိုင်ငံနှင့် ထိုနိုင်ငံ၏
အဆင့်အတန်းတစ်ခုကို ပြညွှန်းမှုနှင့် ချိန်ထိုးစဉ်းစားမှုအပေါ်သာ
မှတ်ချက်။ ။ မနိုင်းနိုင်းစနေ၏ မိတ်ဆက် ဆက်သွယ်ပေးမှုဖြင့် သြဂုတ်လထုတ် LOOK မဂ္ဂဇင်းတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြခံခဲ့ရသော ဆောင်းပါးလေးတပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။ကျမကို ညီမလေးအရင်းသဖွယ် စာပေလောကထဲသို့ လက်တွဲခေါ်ပေးသော မနိုင်းနိုင်းစနေကို အစဉ်ဂါရဝပြုလျှက်....
ဆေးထိုး အပ် နဲ့ ထိုးခံရမှာတောင်
အဲ့ဒီ့ tattoo ထိုးထားတဲ့လူတွေကိုလည်း
ကြည့်ပြီး အသည်း ယားတယ် .. အိ့ ..
ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်း နဲ့ Rဇာနည် ကိုရမ်းကြိုက်တယ် .. :D
တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက်
ခံစားမှု့ စိတ်ချင်း ဘယ်တူပါ့မလဲ ..
ဂစ်တာတွေ ရိုးပြန်ရင် ဘင်ချိုသံဝေ...
ယောင်ကြီးဗွေ ထိုးကွင်းခေတ် ပြန်မြင်ယောင်နေ.
တက်တူးထိုးတာကို ကြိုက်တယ်.. ပြူးပြူးပြဲပြဲပုံတွေထက် သေးသေးမွှားမွှားလေးထိုးရတာကို ကြိုက်တယ်.. ခုထိတော့ မထိုးဖြစ်သေးဘူး... တနေ့နေ့တော့ ထိုးဖြစ်အောင် ထိုးအုန်းမယ်း)
အစဉ်ဂါဝရပြုစရာမလိုပါဘူး နမ်း.. စာလေးတွေ ရေးရေးနေပြီ.. လူချင်းတွေ့တဲ့အခါ မုန့်တွေတဝကျွေးဖို့ပဲလိုတယ်.. ဟား..ဟား
ဂုတ်လေးမှာ ထိုးချင်တယ် ကြယ်လေး တစ်ပွင့်..။
တက်တူးထိုးတဲ့ ကိရိယာတွေက လူသတ်လက်နှတ်တွေနဲ့တူတယ်..။
တို့လိုလူတွေများရင်တော့ တက်တူးဆရာတွေ ထမင်းငတ်မယ်
ဘယ်လိုမှ တက်တူးကို ခံစားလို့မရဘူး
တို့က ခေတ်နောက်ကျနေလို့လည်း ဖြစ်မှာပါး)
ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်းပါ ညီမ နတ်သမီးရေ.... Carry on :)))
ဟုတ်တယ် မမ..ညလေးရောပဲ အရမ်းသဘောကျတယ် ကနုတ်တွေဆို ပိုနှစ်သက်တယ် မထိုးဘူးသေးဘူး ထိုးချင်လယ် ...:):)
ဆေးကျောင်းသားဘ၀တုန်းကတော့ လူနာကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ တက်တူးတွေထိုးထားတာတွေ့ရရင် Aggressive Type လို့ သတ်မှတ်ပြီး အဲဒီလို လူမျိုးတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ ရောဂါအုပ်စုတွေကို ကန့်သတ်ပြီး သတ်မှတ်လိုက်တာပါပဲ...မြန်မာ့ရိုးရာ ဆေးမင်ကြောင်ဓလေ့တွေကိုတော့ ဆရာမြ၀င်းရေးတဲ့ ကျမ်းတစ်စောင်မှာ ဖတ်ဖူးတာမို့ ကျကျနန မှတ်ထားဖြစ်ပါတယ်...နောက်မှပဲ ပြန်ရေးဖို့ စိတ်ကူးထားတုန်း နတ်သမီးက အနောက်တိုင်းက တက်တူးသမားတွေအကြောင်း ရေးထားတော့ ၀မ်းသာအားရ ဖတ်သွားတယ်...တက်တူးထိုးတာ ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် ထိုးတာပါလို့ ဖြေသွားတဲ့ လူရဲ့ အဖြေကိုတော့ သဘောအင်မတန်ကျပါတယ်...ဟုတ်တယ်လေ...ကိုယ်လုပ်တာ ကိုယ်ကြိုက်ဖို့မဟုတ်လား...ဒီကကလေးတွေကတော့ ကိုယ်ကြိုက်လို့မဟုတ်ဘဲ ကောင်လလေးတွေကြိုက်ဖို့ အသားအနာခံနေတာမြင်တော့ သနားလိုက်လေခြင်း နတ်သမီးရယ်...
အားကျနေတယ် ထင်ပါ့ . . .
စိတ်ချမ်းသာမယ် ဆိုရင် ဒူးသာဒူး . .
Congratulation ပါ နတ်သမီးလေးရေ။။
ရှေ့ဆက်ပြီးလဲ ဆောင်းပါးကောင်းကောင်းလေးတွေကို Magazine ထဲ အစဉ်အမြဲ ရေးသားပေးပို့နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
သူကြီးမင်းကတော့ တက်တူဆို ဝေးဝေးရှောင်ပါတယ်။ အလှတွေ ပျက်မှာစိုးလို့။း)))
tattoo ထိုးတာတွေ ကျယ်ပြန့်လာတယ်။
tattoo နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါကွယ်။
aung zin said...
၁ နေ့ ကျောကုန်းအပြည့်ထိုးမလို့ မြန်မာ တတ်တိုးထိုးတဲ့လူကိုမေးကြည့်တာ RM 2500 တဲ့....အင်းးးး မလေးရှား ၁၀၀တန်း ၂၅ ၇ွှင်ကို တံတွေးနဲ့ ဆွတ်ပြီး ကျောကုန်ကပ်ထားတာမှာ လှဦးမယ်းဝ)
ရီစရာလေးပြန်ပြောဦးမယ် စက်ရုံးက စာရေးမအဖြင့် က ဒီလိုပါ သူအဖေနဲ့ အမေ ပုံကို ကျောကုန်းမှာထိုးထားတာတော်တော်လှတယ် ပတ်စ်ပို့ ဆိုဒ် ။ နောက် ၁ ပတ် အလုပ်ဆင်းတော့ ပန်းပွင့်ပုံ ပြန်ထိုးမယ်တဲ့။ ကျတော်က နင့်မိဘပုံကလှပါတယ်လို့ ပြောတော့ . အေး လှတော့လှတယ် ဒါပေ့မယ် ငါ၇ည်းစာ မင်အဖေနဲ့အမေက ငါကို ဘုကြည့် မော့ကြည်နေသလို ခံစား၇လို့ ENJOY မဖြင့်ဘူးပြောလို့တဲ့ ။
အများကြီးသိသွားရတယ်။ တက်တူး လက်ရာတွေ တအားလှတယ်နော်။ ညီမကတော့ မထိုးရဲဘူး။
shwe phyu said...
i oso got tattoo on my arm! tattoo is ART .. totally agree!
ဆုပန်ထွာ၊ စိုးမြတ်သူဇာတို့တက်တူးထိုးထားတာ လှပေမဲ့ စန်းထွန်းကတော့ အသားနာမှာ ကြောက်လို့ ။ မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ ဆောင်းပါးလေးပါလို့congratulations !
တက်တူးဟာ ကျနော့အတွက်ပါပဲ.... သူများမြင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး သူများအတွက် မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာလေး သဘောကျတယ်။ မြန်မာတွေကတော့ မြင်ရင်ပြောကြမှာ မလွဲပါဘူး။ မနေနိုင်ကြတာကိုး။ ကျနော်တော့ ထိုးဖို့အစီအစဉ်မရှိ။
စကားမစပ် နတမွီးမမ ဘဲ ပုံ ထိုးထားတယ်ဆို ဟုတ်လား။။။ ဟိဟိ
(ဘဲဝါလေးပြောတာပါ :)) )
ဆောင်းပါးလေး ဖော်ပြခံရလို့ ဂုဏ်ယူပါသည်....။ ဟိ...တက်တူးကို လည်ဂုတ် ကျောပြင် နဲ့ ခြေကျင်းဝတ်တွေမှာ ထိုးချင်သော်ညားလည်း နာမှာကိုကြောက်လို့မထိုးပါ...။ တက်တူးကို..ကြိုက်၏။
appreciate your work,,,,
Ka Gyie said...
ဒီနေရာမှာ တက်တူးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဖတ်စရာ နည်းနည်းပါးပါး ရှိပါတယ် ။ လေ့လာကြည့်ပါဦး ။
ဒီနေရာမှာ တက်တူးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဖတ်စရာ နည်းနည်းပါးပါး ရှိပါတယ် ။